> Resource > Talooyin > Sida loo Play PowerPoint Madasha on TV
Ciyaaro bandhigyo PowerPoint on TV sii kordhaya oo caan maalmahan tan iyo markii ay ka samatabbixiyaa xal aad u wanaagsan iyo astaamaha. Markaas waxaad la Yaabteen kara: sida aan daawan kartaa bandhigyo PowerPoint on TV aan la isticmaalayo Microsoft PowerPoint ama xataa computer ah inuu u ciyaaro bandhigga? Waxaan halkaan idinkugu laba xal aad u: ciyaari PowerPoint ilayska TV la DVD ciyaaryahan oo ay daawadaan PowerPoint on TV via TV Apple. Laba xal ka duwan yihiin. Haddaba ee aad iska baarto.
Play PowerPoint ilayska TV la DVD ciyaaryahan
Si aad u ciyaaro PPT on TV , waa in aad marka hore badbaadin aad soo bandhigidda PowerPoint in DVD. Mid ka mid ah hababka waqti-ool ah waa in la isticmaalo PowerPoint ah oo dhan-in-ka mid ah ay u Converter DVD in xajisto oo dhan subtleties ah PowerPoint asalka, sida animations, kala guurka, dhawaaqa, video clips, iyo xataa hyperlinks u dhexaysa bogagga.
Halkan Wondershare PPT2DVD si weyn lagu talinayaa. Waa qalab si sahlan loo isticmaalo in gubi kara PPT galay DVD si aad kara daawadaan PPT on TV ama ciyaaryahanka kale ee warbaahinta oo aan computer ah. Raac tallaabooyinka ay bartaan sida loo badalo bandhig PowerPoint in DVD iyo daawan waxa on TV isticmaalaya qalab this.
Talaabada 1: Download iyo rakibi Converter PPT2DVD. Waa bilow iyo geliso DVD faaruq ah.
Talaabada 2: Dooro goob wax soo saarka. Halkan waxaad ka dooran kartaa Standard DVD.
Talaabada 3: dejinteeda files PowerPoint (in PPT, PPTX, PPS, kordhin PPSX) aad rabto in aad ku gubi in DVD. Ilaa 12 files la keeno karo waqti.
Talaabada 4: Markaas dooran caadiga TV midig. Haddii ay markii ugu horeysay aad u badalo PPT ah, si fiican u sii goobaha kale ee horumarsan sida default.
Talaabada 5: Dooro mawduuc DVD menu xaq aad rabto ama astaysto sida aad jeceshahay.
Talaabada 6: Sax "Guba si cajalid" oo guji "Start" si ay u bilaabaan diinta iyo gubanaya nidaamka.
Marka habka gubashadii dhamaystiran, waxaad ka ciyaari kartaa bandhigga PowerPoint ku saabsan TV ciyaaryahanka DVD ah. Waxaad arki doonaa waa habka waqti wax ku ool ah ugu fudud iyo in la isticmaalo u arkaysid PowerPoint on TV, DVD ciyaaryahanka waxaa laga heli karaa xaalado badan. Waxay noqon kartaa mid aad u sahlan si loo qaybiyo kadib markii PowerPoint gubanaya si DVD.
Daawo PowerPoint on TV via TV Apple
Apple TV waa qalab network u ogolaanaya in ay isticmaalaan macaamiisha set HDTV ah si aad u eegto sawiro, muusig iyo daawato video in ka timid adeegga warbaahinta Internet ama network degaanka ah. Marka aad rabto in aad ka ciyaari PowerPoint on TV via TV Apple, waa inaad raacdid talaabooyinkan soo socda:
Talaabada 1: Beddelaan PowerPoint in qaabab video qaarkood sida MP4 in la aqbali karin by Lugood iyo hagaagsan. Waxaad isticmaali kartaa tan PPT si Video Converter inuu kaa caawiyo inaad badalo qaab u gaar ah in laga garan karaa TV Apple.
Talaabada 2: geliyaan video ay u Lugood iyo hagaagsan in Apple TV, ka dibna aad kara daawadaan aad PPT ku riyoonayaa.
Ka dib markii la isticmaalayo habab, waxaan u qaybin karaan profile shirkadda la koobi DVD ah, soo bandhigaan PPT ku wargelin on TV sugi qolalka, lobbies ama foyers, oo waxaad ka samaysaa in-guryaha advertising DVD slideshow si fudud. Dhab ahaantii, by gubanaya bandhig PowerPoint in DVD , waxaad sidoo kale abuuri kartaa DVD tababarka, warbixinta sannadlaha ah, iyo slideshow sawir iyo wixii la mid ah.
Sida loo Play PPT on iPhone 4s